ထပ်တူပြုခြင်း - Dropbox နှင့် Bittorrent Sync တို့အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည် Linux မှ
ထပ်တူပြုခြင်း - Dropbox နှင့် Bittorrent Sync တို့အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ
2.4 Synthing GTK တပ်ဆင်
သင် Syncthing နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိလျှင်၎င်းသည် Go ဘာသာစကားတွင်ရေးဆွဲထားသည့်ရွယ်တူချင်းတူတူသုံးစွဲသူ / ဆာဗာဖိုင်ထပ်တူပြုခြင်းအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် BitTorrent ထပ်တူပြုခြင်း။ သို့သော်၎င်းနှင့်မတူဘဲ Syncthing သည် open source ဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးလက္ခဏာအချို့ကိုကြည့်ကြရအောင် ...
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆွေးနွေးမှုမှဖွင့်လှစ်။ ရပ်ရွာလူထုသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ပြီးအတွေးအခေါ်သစ်များဖြည့်ဆည်းသည်။
ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်။ အရင်းအမြစ်ကုဒ်အားလုံး GitHub တွင်ရနိုင်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းသင်ရရှိသည်၊ သင်၏အချက်အလက်နှင့်လျှို့ဝှက် "သဘောတူညီမှု" မရှိပါ။
ပွင့်လင်း protocol ကို။ protocol သည်ပွင့်လင်းပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားသောစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Syncthing အသုံးပြုသော protocol
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပွင့်လင်းအမှားအစီရင်ခံ။ တွေ့ရှိရသောအမှားများကိုမည်သူမဆိုပြင်ဆင်ရန်ချက်ချင်းမြင်နိုင်သည် - လျှို့ဝှက်အားနည်းချက်များမရှိပါ။
ပုဂ္ဂလိကပိုင်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်မှလွဲ။ သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်၍ ခိုးယူနိုင်သည့်ဗဟိုဆာဗာမရှိပါ။
စာဝှက်ထားတယ်။ ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို TLS သုံး၍ လုံခြုံသည်။ အသုံးပြုထားသောစာဝှက်စနစ်ကမည်သည့်သူလျှိုကိုမဆိုသင်၏ဒေတာကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြု။
အသိအမှတ်ပြု။ node တစ်ခုစီကိုအားကြီးသော cryptographic လက်မှတ်ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ သင်အတိအလင်းအတည်ပြုပြီးသော node များသာသင်၏အဖွဲ့များကိုဆက်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်။
Web GUI။ Syncthing ကိုရိုးရှင်း။ အစွမ်းထက်သော web interface မှတစ်ဆင့် configure လုပ်နိုင်သည်။
ခရီးဆောင်။ ၎င်းသည် Mac OS X, Windows, Linux, FreeBSD နှင့် Solaris တို့တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းကို desktop ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်လည်ပတ်နိုင်ပြီးအရန်ကူးရန်အတွက်ဆာဗာနှင့်ထပ်တူပြုနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းသော။ ထပ်တူပြုခြင်းသည်အိုင်ပီလိပ်စာများသို့မဟုတ်အခြားအဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်မှုများမလိုအပ်ပါ စက်တစ်ခုချင်းစီကို ID တစ်ခုမှသတ်မှတ်သည်။ သင်၏ ID ကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုသာ ပေး၍ ဖိုလ်ဒါတစ်ခုမျှဝေပြီးအရာအားလုံးမှော်အနေနှင့်မည်သို့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေသည်ကိုကြည့်ပါ။
Synthing GTK တပ်ဆင်
Syncthing GTK ကို PPA မှတဆင့် Ubuntu 15.04, 14.10 and 14.04, Linux Mint 17.1 and 17 တို့အတွက်ရရှိနိုင်သည်။ PPA ကိုထည့်သွင်းပြီးထည့်သွင်းရန်အောက်ပါ command များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
sudo add-apt-repository ppa: nilarimogard / webupd8 sudo apt-get update sudo apt-get install syncthing-gtk
Arch Linux အသုံးပြုသူများသည် Syncthing GTK ကိုတရားဝင် repositories မှတဆင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
sudo pacman -S ကို syncthing -gtk
Git version ကို AUR တွင်ရနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: Syncthing မှတ်တမ်း & Github အပေါ်ဗီဇ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ထပ်တူပြုခြင်း - Dropbox နှင့် Bittorrent Sync တို့အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ
မဟုတ်ပါ၊ သင် Bittorrent Sync ကဲ့သို့သိုလှောင်မှုကိုထားရှိသည်။
နောက်ဆုံးမှာသူတို့က "Pulse" ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းမသွားဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ... ဒါကသိပ်မကြာသေးခင်ကမှပါ။ ငါစိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုအတွက် link ကိုစွန့်ခွာ: https://ind.ie/about/blog/pulse/
အချို့သောအခွင့်အလမ်းအားဖြင့် Google ကဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်မဟုတ်လော
ဖရန့် Yznardi Davila Arellano ဟုသူကပြောသည်
ပြတင်းပေါက်အတွက်ဗားရှင်းရှိပါသလား။ နှင့် Fedora အဘို့? ဘယ်လိုပြင်ဆင်သလဲ။
Frank Yznardi Davila Arellano အားပြန်ပြောပါ
Seafile ကိုလဲအကြံဥာဏ်ပေးဖို့အခွင့်အရေးယူတယ်။ သူက server နဲ့ client (multiplatform) ။ ၎င်းတွင်သုံးစွဲသူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စာဝှက်စနစ်နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ BitTorrent Sync နှင့်မတူပဲအိုးနှင့် API တစ်ခု။
Seafile တွင် Android နှင့် desktop (cross-platform) အတွက်သုံးစွဲသူ၏ application တစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဟုတ်မဟုတ်မသေချာပေ။ သင့်တွင်အွန်လိုင်းပူးပေါင်းမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိပါသလား။ စာသားဖိုင်များသို့မဟုတ်စာရင်းဇယားများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုမှာသင့်မှာ NAS အထောက်အပံ့ရှိသလား။ အထူးသဖြင့် FreeNas, OpenMediaVault, Free4Nas သို့မဟုတ် Amahi (မည်သည့် OS-NAS ကိုထည့်သွင်းမည်ကိုကျွန်ုပ်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ) အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောသူများအတွက်၊ ထို့အပြင် server-client မှအလွန်အရေးကြီးသော (ရွေးချယ်နိုင်သော) ဖိုင်များ၏ 'cloud' များအကြားထပ်တူပြုခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သလား။ ဒါမှမဟုတ်အများကြီးတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Owncloud မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပိုမိုကြီးမားသောဓာတ်ပုံကိုလိုချင်သည်။
၎င်းတွင် Android အက်ပလီကေးရှင်းများရှိပြီး multi-platform ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကစီမံကိန်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ http://syncthing.net/
Cloud.com မှ office.com ကိုအသုံးပြုရန် linux ကိုဒေသဆိုင်ရာအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလိုလိုသည်။ ´(
သင်ရှာဖွေနေသည်မှာဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါက Abiword ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
google doc ငါအလုပ်လုပ်သောဝံများနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ငါ zoho ဖန်တီးသူနှင့်၎င်း၏အစီရင်ခံစာများကိုအသုံးပြုသည်။ office.com ကဲ့သို့ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအရာများကိုဒေသခံဒေတာဘေ့စ်များဖန်တီးနိုင်ပြီးအော့ဖ်လိုင်းဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ moodle ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက office.com နှင့်ပေါင်းစည်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအနေနှင့်သို့မဟုတ် module တစ်ခုအသုံးပြုသော module တစ်ခုနှင့်၎င်းအားမည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုကျွန်ုပ်အားစိတ်ဝင်စားစေသည်၊ moodle ကိုဒေသခံကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ ကျနော့်အမြင်မှာကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာ၊ လက်ပ်တော့ပ်၊ တက်ဘလက်နဲ့ဖုန်းမှာကျွန်ုပ် install လုပ်ထားသောဖိုင်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်အသုံးပြုသော android အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်မှာမှားသည်။ သင့်တွင် android app ရှိပါကကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းတော့မည်။
Zetaka ၁၀ ဟုသူကပြောသည်
Go ၏နောက်ဆုံးမူကွဲသည်၎င်း၏မူလကတည်းကပလက်ဖောင်းများအကြားတွင် cross-compiler ရှိသောကြောင့် Android အတွက်လည်းထုတ်လုပ်သည်။
မူရင်းအားဖြင့်သင်သည် Windows သို့မဟုတ် Linux မှစုဆောင်းပြီးထွက်ရှိမှုသည် Windows၊ Linux သို့မဟုတ် Intel-ARM Android အတွက်ဖြစ်သည်။
target platform ပေါ် မူတည်၍ programming mode သည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်။
ဂူ, Go အတွက်ဝဘ် application တစ်ခု။ ငါသူတို့အသုံးပြုတဲ့ web framework ကိုသိရန်လိုသည်။ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘူး၊ သူတို့မှာ gtk နဲ့ qt စတဲ့စာကြည့်တိုက်များနှင့်စည်းနှောင်ထားတာကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ go ၏အတွင်းပိုင်း "အတန်း" များထဲမှတစ်ခုသည်အသေးစားဝဘ်ဆာဗာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုသင်စတင်သည်။ ဥပမာကောင်းတယ်၊ code ကိုစစ်ဆေးသင့်တယ်။ ဤဝဘ်ဒီဇိုင်းဖြင့်၎င်းသည် multiplatform ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဘရောင်ဇာတစ်ခုသို့မဟုတ်နီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်သောဘရောင်ဇာတစ်ခု၏လည်ပတ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် pc နှင့် mobile (android) ကြားရှိဖိုင်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မိုဘိုင်းဖောက်သည်တစ်ခုတည်းနည်းနည်းပို့သို့မဟုတ်မလက်ခံ
မင်္ဂလာပါကားလို့စ်။ သင်လိုအပ်သော ports ကိုဖွင့်ပြီးပြီလားသင်ကဲ့သို့သင်နှင့်ထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ငါအလုပ်လုပ်ပြီးသော ports ကို configure လုပ်ပြီးနောက် firewall ကို configure လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းငါသဘောပေါက်လာသည်။ ငါတစ်ပါတ်အဘို့အစီအစဉ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီးယခုအချိန်အထိကငါ့အဘို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျုံး Rossello ဟုသူကပြောသည်
ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကို မျှဝေ၍ မရပါ၊ ကြိုးစားသောအခါအမှားတစ်ခုရပါသည်။
yncthing configuration.Invalid HTTP response ကိုသိမ်းရန်မအောင်မြင်ပါ
PC နှစ်ခုရှိပြီးမူလ OS နှင့်အတူတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ubuntu 14.04 ဖြစ်သည်
Joan Rossello အားပြန်ပြောပါ
XFCE မှသတင်း !! Xfce 4.12 မှာဘာအသစ်တွေလဲ။
GNU / Linux အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း console emulators